musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Yuropa yezhizha yekufamba nendege kupora inokundikana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nyika dzakatambura zvakanyanya ndidzo dzinovimba zvakanyanya pakufamba kwenguva refu, senge France neItari uye idzo dzakatemesa zvinetswa zvinotyisa uye zvisina kugadzikana pakufamba senge UK, iyo yakaneta pazasi pechinyorwa, ichiwana chete 14.3% ye 2019 mazinga.
European zhizha kufamba kwemhepo kwakasvika 39.9% ye pre-denda nhanho.
Mufananidzo wacho wakasanganiswa, nedzimwe nzvimbo dzichiita zvirinani pane dzimwe.
Kubhuka kwakanonoka kusvika kumagumo enguva yezhizha.
Tsvagurudzo nyowani inoratidza kuti ndege dzenyika dzese dzinoenda kunzvimbo dzekuEurope muna Chikunguru naNyamavhuvhu dzakasvika 39.9% yematanho epamberi pehosha. Izvi zviri nani kwazvo kupfuura gore rapfuura (raive 26.6%), apo denda re COVID-19 rakakonzera kukiyiwa kwakapararira; uye majekiseni akanga asati abvumidzwa.
Nekudaro, iwo mufananidzo waive wakasanganiswa kwazvo, nedzimwe nzvimbo dzichiita zvirinani kupfuura dzimwe. Zvakare, maonero haasi kuvandudzika, sezvo kushambadzira kwakadzora kusvika kumagumo ezhizha mwaka.
Tichitarisa kuita nenyika, Girisi ndiko kumira. Yakawana 86% yaJuly naAugust vasvika muna 2019. Yakateverwa neCyprus, iyo yakawana 64.5%, Turkey, 62.0% uye Iceland, 61.8%. Girisi neIceland ndidzo dzaive pakati penyika dzekutanga kuburitsa pachena zvirevo zvekuti vaizogamuchira vashanyi vakabaiwa jekiseni zvizere uye / kana vaigona kuratidza yakaipa PCR bvunzo uye / kana vaigona kuratidza humbowo hwekuwanazve kubva kuCOVID-19.
Nyika dzakatambura zvakanyanya ndidzo dzinovimba zvakanyanya pakufamba kwenguva refu, senge France neItari uye idzo dzakatemesa zvinetswa zvakanyanya uye zvisina kugadzikana pakufamba senge UK, iyo yakaneta pazasi pechinyorwa, ichingowana chete 14.3% yemazinga e2019.
Kusanganisira vatakuri vemutengo wakaderera, ndege dzepakati peEurope dzakaumba 71.4% yevanosvika, zvichienzaniswa ne57.1% muna 2019. Kuparara kwevashanyi venguva refu, avo vanowanzogara kwenguva yakareba, vanoshandisa yakawanda uye vanoisa pfungwa dzavo kumaguta nekuona nzvimbo. yakatemerwa mumatanho enzvimbo dzakanakisa uye dzakaipisisa dzenzvimbo.
Kufamba kuenda kuLondon kwainyanya kuodza moyo; yaive pazasi pechinyorwa chemaguta eEuropean akabatikana, ichiwana chete 14.2% yevanosvika 2019. Rondedzero iyi yaitungamirwa naPalma Mallorca, zvakare inzvimbo huru yekumahombekombe yekuenda kumahombekombe, ichisvika 71.5% yematanho e2019 uye neAthens, gedhi kuzvitsuwa zvakawanda muAdriatic, pa70.2%. Maguta makuru akatevera anoita zvakanaka aive Istanbul, 56.5%, Lisbon, 43.5%, Madrid, 42.4%, Paris, 31.2%, Barcelona, ​​31.1%, Amsterdam, 30.7% uye Roma, 24.2%.
Nokuenzanisa, nzvimbo dzekuzorora dzakaratidza kuve dzakanyanya kusimba. Chinzvimbo chese makuru nzvimbo dzekuenda (kureva: avo vane mugove wemusika unodarika 1%) yaitungamirwa nenzvimbo dzepamhenderekedzo dzegungwa hotspots kana gedhi kwavari. Vatungamiriri vaive Heraklion naAntalya, ayo akapfuura pre-denda matanho ne5.8% uye 0.5% zvakateerana. Ivo vakateverwa naTesaloniki, 98.3%; Ibiza, 91.8%; Larnaca, 73.7% uye Palma Mallorca, 72.5%.
Kunze kwemaitiro macro, dzimwe nzvimbo dzakafambiswa zvirinani kana zvakanyanya kune zvimwe zvikonzero zvemuno. Semuenzaniso, Portugal, inova nzvimbo inofarirwa nevanozorora kuUK, yakatambura apo UK yakachinja zita rayo kubva pagirinhi kuenda kune amber muna Chikumi; uye Spain yakatambura pakupera kwaJuly apo Germany yakanyevera nezvevose kunze kwekukosha kwekufamba.
Kana munhu akatarisa kuti zvinhu zvaityisa sei zvekushanya kuEurope gore rapfuura, ino mwaka wezhizha yanga iri nyaya yekudzikisira ine mwero. Yakataridzirwa kupesana nenguva dzakajairika, kuenderera kwakadzikira kwekufamba kwemhepo kwepasirese, isingasvike makumi mana muzana ezvakajairika, kwave kukuvadza zvakanyanya kune indasitiri yendege. Kuenderera mberi kwekushayikwa kwevafambi venguva refu, kunyanya kubva kuFar East (zvakangosvika 40% yezvakaitika pre-denda muzhizha rino) zvicharatidza kurova kwakanyanya kune hupfumi hwevashanyi hwenyika dzinoverengeka dzeEurope.
Kana paine chinhu chekunyaradza, vanhu "vanogara", kureva: kutora zororo munyika mavo. Ipo nendege yekumba iine chikamu chidiki chemusika muEurope munguva dzakajairika, yakasimudza zvirinani munguva yedenda nekuti yanga isiri pasi pemitemo yakaoma yekufamba. Semuenzaniso, maCanaries neBalearics vakagamuchira vashanyi vazhinji veSpanish kupfuura zvavanoita mumwaka wakajairwa.